Magacyada faylka dheer ee Windows 10 > Vielhuber David
Magacyada faylka dheer ee Windows 1004
Kaliya maahan markaad isticmaaleyso npm hoosta Windows-ka waxaad la kulmeysaa xadka hadda ku dhow 30 sano, kaas oo xaddidaya waddooyinka galka iyo faylasha ugu badnaan 255 xaraf Tani maahan NTFS qaladkeeda, laakiin LFN . Tani waxay u horseedaa cayayaanka dhibta badan iyo iswaafaq la'aanta ka dhexeysa nidaamyada hawlgalka. Waqtiyada WSL, tani waa xaalad laga xumaado, taas oo nasiib wanaag aad isku hagaajin karto diiwaanka in muddo ah.
Xitaa hadda Windows 10 Pro 1709 hadda waxaad heleysaa farriintan markii aad abuureyso galka / feylka oo aad u dheer:
Kadib Cusboonaysiinta Sannad-guurada ee Windows 10 waxaad ugu dambayntii qaadi kartaa xadkaas. Waa inaad ogaataa in softiweerkii hore uusan awood u yeelan doonin inuu marin u helo faylal ka baxsan xadkaan. Maahan in 32-bit software kasta halkan lagu saameeyo waxaadna u ogolaan kartaa inay timaado tijaabo. Waxaad ku wareegeysaa furaha leh regedit
oo abuura (haddii aanu hore u jirin) qiimaha DWORD (32-bit) LongPathsEnabled oo u dhig qiimaha 1.
Isbeddelku waa firfircoon yahay ka dib markii dib loo bilaabay. Nasiib darro, Windows Explorer-ka guriga gudihiisa ma taageerayo waddooyin dhaadheer xilligan (tani waxay rajeyneysaa inay mustaqbalka is beddesho). Taabadalkeed, waxaad adeegsan kartaa aalado aad u awood badan sida Hal Taliye , oo hadda u oggolaanaya waddooyinka leh dherer dabeecad ahaan 32767 xarfood.